﻿Download Umqulu Wesevisi 3 woLwimi LweOfisi kuMqulo wama-2007 (KB2526307) from Official Microsoft Download Center
Umqulu Wesevisi 3 woLwimi LweOfisi kuMqulo wama-2007 (KB2526307)
HausaIgboInuktitut (Latini)Isi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosiniya (isiSirilikhi) saseBosniaIsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsi-IndoneshiyaIsiJojiyaIsiKannadaIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiLaoIsiMalayalamIsiMalayi (saseBrunei Darussalam)IsiMalayi (saseMalaysia)IsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-Uzbek (iLatini)IsiVietnamIsiWelshiIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliSetswana (Aforika Borwa)umAyirishiUrdu - Pakistan
Umqulu weSevisi 3 unohlaziyo lwakutsha nje loMqulu weOfisi yoLwimi le-Windows 2007.
Ushicilelo:1Igama lefayile: officelip2007sp3-kb2526307-fullfile-xh-za.exeUmhla wopapasho:2011/10/25Isayizi yefayile: 15.2 MB
AmaNqaku oLwazi asisiSeko (iKB): KB2526307
Unokufumana inkcazelo ethe ngqo ngohlaziyo kwinqaku le-Microsoft Knowledge Base Umqulu weSevisi 3 yeOfisi yoLwimi lowama-2007 (KB2526307).
Olu hlaziyo luhambisana nale mveliso ilandelayo: Umqulo weOfisi yoLwimi yowama 2007, uHlelo lwe-32-bit Iyaxhaswa yi-Windows Installer Version:Windows Installer 3.1 okanye ngaphezulu
Iseva yeWindows yama-2003 Umqulu weSevisi 1 iquka i-Windows Installer 3.1. i-Windows Installer 3.1 iyafumaneka ngokwahlukileyo xa ikhutshwa kwindawo yayo:
i-Windows Installer 3.1 Inokusasazwa (v2)
Phawula>: Abanobuchule be-IT bamele babhekiseleUmthombo wanobuchule be-IT. inxalenye.Imiyalelo yokufakwa
Ukuba unoMqulo wangaphandle we-Microsoft Office yoLwimi 2007, uHlelo 32-bit, Yenza okulandelayo:Faka Umqulo wesevisi 3 yoMqulo weOfisi yoLwimi 2007 (KB2526307). > Ukwenza oku, landela la manyathelo alandelayo:Khupha uxwebhu lwe-.exe ngokucinezela iqhosa Khupha emazantsi ephepha, uze ugcine uxwebhu kwikhompyutha yakho.Kucetyiswa ukuba uzivale zonke iiprogramu ozivulileyo.KwiWindows Explorer, cinezela kabini kuxwebhu lwe- .exe olugcine kwikhompyutha yakho, uze ulandele imiyalelo ekwisikrini.Umthombo wechule le-IT
Ichule le-IT elisebenza ngokulungelelanisa okungqongileyo linokufumana umthombo opheleleyo ngokufumana uhlaziyo lweOfisi kwintlangano kwi Iinkqubo zeOfisi neeprogramu ze-TechCenter.
Olu hlaziyo lufumaneka ngokukhutshelwa oko kunokwenziwa ngokucinezela iqhosha elithi Khuphelakwiphepha elingaphezulu. Unokucinezela kabini ipakethi yolwakhiwo, okanye ifayile yepetshi (iifayile ze-MSP) ngokusebenzisa umgca woyalelo. Umgca woyalelo nemiyalelo kuqukiwe kwinqaku le-Knowledge Base Umgca woyalelo lutshintsha kwiipakethi ze-Microsoft Self-Extractor (KB912203).
Funda inqaku le-Microsoft Knowledge Base DInkcazelo ngoMqulu weSevisi 3 kwuMqulo weOfisi yoLwimi yama-2007 (KB2526307) ukuze ufumane inkcazelo ngohlaziyo. IiDawunlowdi eziThandwayoIiFemili zeMveliso